७८ बर्षीय बृद्धले २४ बर्षिय युवतीसंग बिहे गरेको ३ महिना पछी यस्तो कुरा बाहिरियो जुन सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ।युवती भन्छिन: यौ नसम्बन्धदेखि सबै कुरा भइसक्यो - Kohalpur Trends
७८ बर्षीय बृद्धले २४ बर्षिय युवतीसंग बिहे गरेको ३ महिना पछी यस्तो कुरा बाहिरियो जुन सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ।युवती भन्छिन: यौ नसम्बन्धदेखि सबै कुरा भइसक्यो
trendsminad November 6, 2020	No Comments
मानिसको जीवनमा अनेक संयोगहरु हुने गर्छन् । तर कतिपय संयोग यस्ता पनि हुन्छन्, जो मानिसले कल्पनासम्म गरेका हुँदैनन् । यस्तै भएको छ, अमेरिकाको फ्लोरिडा बस्ने २४ वर्षीया एक युवती र ७८ वर्षका बृद्धलाई । ७८ वर्षको उमेरमा एकजना धनी बृद्ध व्यक्तिले २४ वर्षीया युवतीसँग विवाह गरे । बिहेपछि दुबैको जीवन सुखद बितेको थियो । तर तीन महिनापछि भने उनीहरुको जीवनमा भूकम्प आयो ।
तीन महिनापछि युवतीलाई थाहा भयो, आफूले श्रीमान मान्दै आएका व्यक्ति त उनका आफ्नै हजुरबुवा पो रहेछन् । आफ्नो श्रीमानका पुराना तस्वीरहरुको एल्बम हेर्दा उनको आँखा एउटा तस्वीरमा गयो । उक्त तस्वीरमा उनका बृद्ध श्रीमान र पहिलो श्रीमती र बच्चाहरुको तस्वीर थियो ।उनले सोध्दा पहिलो श्रीमतीको बारेमा श्रीमानले बताए । त्यसपछि श्रीमान मानेर बसेको मान्छे त आफ्नै हजुरबुवा पो परेछ भन्ने स्पष्ट भयो । त्यसपछिको अवस्था के भयो होला, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं ।
तर अचम्म, सबै कुरा थाहा पाएर पनि यी युवतीले भने आफ्ना हजुरवुवालाई छोड्न चाहँदिनन् । उनको भनाई छ, ‘हामीबीच राम्रो सम्बन्ध छ । यौ’नसम्बन्धदेखि सबै कुरा भइसक्यो । अब त्यो नाता अहिले थाहा भएको हो, त्यसैले मैले छोड्न सक्दिन ।’
मेल अनलाईनका अनुसार, बृद्ध व्यक्तिकी पहिलो श्रीमतीले उनलाई छोडेर हिंडेकी थिइन् । निकै खोजतलास गरेर पनि नपाएपछि उनले अर्को विहे गरेका थिए । दोश्रो बिहे पनि टिक्न नसकेपछि उनी त्यसै बसेका थिए ।
यसैबीच उनले लौट्रीबाट निकै बढी पैसा कमाए । त्यसपछि उनलाई फेरी बिहे गर्ने रहर जाग्यो । अनि एउटा डेटिंग एजेन्सीको माध्यमबाट उनले अहिलेको नातीनी नाता परेकी युवतीसँग बिहे गरे । एजेन्सीको सहयोगमा
The put up ७८ बर्षीय बृद्धले २४ बर्षिय युवतीसंग बिहे गरेको ३ महिना पछी यस्तो कुरा बाहिरियो जुन सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ।युवती भन्छिन: यौ नसम्बन्धदेखि सबै कुरा भइसक्यो appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: आज सनिबार यसरि गर्नुहोस शनिदेबको पुजा…..लाभ मिल्नेछ !
Next Next post: भाग्यमानी पुरूषहरू ति हुन जसले यि दुई राशि भएका युवतीसग विवाह गर्न पाउँछन